10 barnaamij oo ku biiraya dhowr PDF-gii oo laga dhigay hal | Abuurista khadka tooska ah
10 barnaamijyo si ay ugu biiraan dhowr PDF-yada oo mid loo noqdo
Lola curiel | | Qalabka Naqshadeynta
Waxaan badanaaba ku keydinaa shaqadeena PDF markaan u baahneyn wax isbadal ah. Waa habka ugu fiican ee loo ilaaliyo dukumintigaaga oo looga hortago qaabka ama qaabka inuu lumo marka lala wadaagayo isticmaaleyaasha kale. Si kastaba ha noqotee, waa qaab adag in wax laga beddelo. Nasiib wanaag, Waxaa jira qalab internetka ah oo noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno noocyada feylasha, sidaa darteed rabitaanka in lagu daro sharraxaad, saxeexyo ama bogag ka dib xaqiiqda hadda dhib maahan. Qoraalkan waxaan kaaga sheegayaa qaar ka mid ah softwares-yadaas, gaar ahaan Waxaan ku tusayaa 10 barnaamij oo aad mid mid ugu biirto dhowr PDF.
1 Waan jeclahay PDF
3 Qalabka PDF24
4 Fudud PDF
5 Isku dar PDF
6 Hoyga PDF
9 Muuqaalka PDF-XChange
Waan jeclahay PDF
Waan jeclahay PDF waa barnaamij bilaash ah oo khadka tooska ah laga helo taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad si deg deg ah oo fudud u sameyso isbadal ku dhaca faylasha PDF. Ka kooban a qalab kala duwan waxtar badan oo kuu oggolaan doona:
Midee PDF-yada badan hal oo u kala dhig siday u kala horreeyaan.
Ka soo saar bogagga PDF kuna keydi iyaga sidii faylal gooni ah.
Cadaadi PDFs markaa miisaankoodu aad buu u yaraa iyada oo aan lumin tayada.
Beddel faylasha PDF-ka ee loo yaqaan 'Word, PowerPoint ama Excel' iyo dhinaca kale.
Wax ka beddel PDF-yada, ku dar qoraallada, sawirrada ama qaababka
Fur ama ilaali faylasha PDF
Waxa ugu fiican ayaa ah in la isticmaalo qalabkan, xitaa uma baahnid inaad isdiiwaangalisoSi fudud u gal shabakadda, xulo waxaad rabto inaad sameyso oo aad geliso faylashaada.
Yar-yar waa barnaamij online ah taas, marka lagu daro inay ku jiraan qalab bilaash ah, waxay bixisaa nooc qaali ah oo leh faa iidooyin dheeri ah (7,5 euro bishii). Ujeedada barnaamijkani waa ku hagaaji shaqadaada dukumiintiyada, adoo ka dhigaya hawlahaaga kuwo aad u fudud. Smallpdf waxaad ku:
Tafatir dukumiintiyada: muuji qaybaha qoraalka kuna dar sawirro, qaabab iyo faallo ku saabsan dukumintiyadaada.
Saxeex dukumiintiyada iyo qandaraasyada, iyo sidoo kale saxiixyo codsi.
Isku-darka ama kala-baxa PDF-yada.
Cadaadiya PDF-yada culus, markaa diristoodu way ka dhakhso badan tahay waana sahlan tahay.
Gali lambarrada bogga.
U beddel PDF ereyga, PowerPoint iyo Excel.
Cilladaha kaliya ee aan ku arko barnaamijka waa in, iyadoon la bixin rukunka, waxaad kaliya socon kartaa laba talaabo maalintii lacag la’aan.
Si waxaad raadineysaa xawaare iyo hufnaan, tani waa ikhtiyaarka aad raadineyso. Qalabka PDF24 waa barnaamij lagu badalo PDF-yada kaas oo u oggolaanaya ku biir dukumiintiyada bilaash. Fudeydkeedu wuxuu ka dhigayaa shaqada mid aad u fudud, waa inaad doorataa inaad ku biirto PDF-ka guriga PDF24 Qalabka iyo jiidi dhammaan faylasha aad rabto inaad ku biirto shaashadda barnaamijkuna wuxuu si otomaatig ah ugu samayn doonaa ilbiriqsiyo gudahood.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan qalabkani waa taas, in kastoo looma baahna in la rakibo, waxay bixisaa nooc desktop ah oo bilaash ah, sidaas waad kubiiri kartaa PDF-yada xitaa hadii aadan laheyn wax xiriir ah internetka.
Kuwa kale barnaamijka internetka ee shaqeynaya iyo mid saaxiibtinimo leh es Fudud PDF, barnaamijkaas waxaa si gaar ah loo abuuray si aad u awoodid ku soo biir waraaqahaaga iyada oo aan loo baahnayn in la isdiiwaangaliyo, si badbaado leh oo dhakhso leh. Waxay u ogolaaneysaa ku milmaan in ka badan laba dukumiinti isla waqtigaas, si fudud adoo jiidaya feylasha shaashadda oo gujinaya badhanka "ku biir PDF". Dukumintiyada waxaad kala soo bixi kartaa kombiyuutarkaaga, ama toos uga imaan kartaa Google Drive ama Dropbox. Intaas waxaa sii dheer, waa gebi ahaanba bilaash ah oo aan lahayn xadka isticmaalka, waad u isticmaali kartaa inta jeer ee aad rabto.
Isku dar PDF
Isku dar PDF waa barnaamij bilaash ah, aadna u fudud in la isticmaalo iyo in wuxuu kuu dhigayaa agab aad u awood badan oo isugu jira sawirrada ama PDF-yada dokumenti keliya. Intaas waxaa sii dheer, uma baahnid inaad diiwaangeliso ama rakibto nooc kasta oo barnaamij ah kombiyuutarkaaga si aad u isticmaasho. Waad mideyn kartaa faylashaada adoo jiidaya shaashadda ama adigoo gujinaya batoonka "upload", markii la soo dejiyo riix "isku dar" waxaadna awoodi doontaa inaad soo dejiso PDF-gaaga. Waxa aan ugu jeclahay barnaamijkan waa kaas wuxuu kuu ogolaanayaa inaad geliso ilaa 20 faylal kala duwan.
Hoyga PDF waa barnaamij web in bixiya qalab online in si lacag la’aan ah oo ammaan ah u maamusho PDF-yada. Barnaamijkan waxaad ku sameyn kartaa:
U beddel faylasha JPG PDF iyo PDF faylasha loo beddelo JPG
Ka mid noqo oo kala qaado PDF-yada.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ayaa ah markii aad ku biirto feylashaada waxaad awoodi doontaa inaad wax ka bedesho, waad rogi kartaa, tirtiri kartaa ama beddeli kartaa dalabkooda. Sidoo kale, hoyga PDF waxay yihiin qalabka isticmaalayaasha ee ka baaraandega faylasha Wax laga beddelay, iyagu ma aaminaan hawshan server-yada fog, sidaas awgeed waxay yareynayaan halista dadka kale u heli karaan dukumiintiyadaada
CleverPDF waa tifaftire khadka tooska ah ee PDF in, marka lagu daro in laguu oggolaado midowdo PDF badan mid, waxay bixisaa suurtagalnimada in la beddelo ku dhowaad qaab kasta faylka ku qor PDF. Waad u rogi kartaa Word, Excel, TIFF, dukumintiyada Epub ... hal guji oo keliya. Midee faylasha kala duwan barnaamijkan waa mid aad u fudud, kaliya ka soo dhoofso kombiyuutarkaaga, Drive ama DropBox. Intaa waxaa sii dheer, waad wax ka beddeli kartaa amarka dukumiintiyada, si looguugu hagaajiyo sida saxda ah ee aad u baahan tahay.
Qalab kale aad waxtar u leh marka la midoobayo PDFs waa PDF2GO. Waa khadka tooska ah, bilaashka ah, intaa waxaa sii dheer, waxay la jaanqaadi kartaa taleefannada gacanta iyo aaladaha kale, waa inaad ka soo gasho shabakadda biraawsarkaaga caadiga ah. Si aad ugu soo biirto dhowr PDF ah PDF2GO xamuul faylasha PDF waxaad dooneysaa inaad midowdo, waxaad ka sameyn kartaa desktop-kaaga, Drive ama DropBox ama adigoo isticmaalaya URL. Waad beddeli kartaa nidaamka faylasha jiididda iyo dib u habeynta iyaga sida aad jeceshahay. Hadaad gujiso badhanka "badbaadi", waxaad ka heli doontaa fursadaha kaydinta; haddii aad mar labaad gujiso isla goobtaas, waxaad heli doontaa dukumintigaaga oo la midoobay.
Muuqaalka PDF-XChange waa codsi desktop ah in waxay siisaa qalab aan dhammaad lahayn loogu talagalay in lagu hirgeliyo dhammaan noocyada isbeddelada faylasha PDF. Ka mid ah sifooyinka bilaashka ah ee ay bixiso, waxyaabaha soo socda ayaa istaaga:
U badal PDF-yada faylal qaab kale ah, BMP, JPEG, TIFF, PNG, Ereyga ...
Kudar dhammaan noocyada sharaxaad iyo faallooyinka
Nasiib darrose, si aad ugu biirto PDF-yada barnaamijkan waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo nooca pro in haddii la bixiyo. Si kastaba ha noqotee, waxtarkeeda, haddii aad u adeegsan doonto wax badan iyo haddii aad dooneysid inaad ka faa'iideysato dhammaan astaamaha barnaamijka, waa u qalantaa.
Sejda waa aalad qadka toos loogu mideeyo PDF-yada, ayaa sii socota oo waxay bixisaa tallaabooyin taxane ah oo dheeri ah oo hagaajin doona dukumintigaaga kama dambaysta ah markii faylal kale oo barnaamijka ka mid ah. Waxa ugu fiican ayaa ah, marka lagu daro noqoshada qalab tayo leh, waa bilaash ah dukumiintiyada ilaa 50 bogag ama 50 Mb iyo intaadan ka badnayn 3 hawlood saacad gudaheed.
Mideynta PDF-yada Sejda waa mid aad u fudud. Marka hore, soo dhoofso faylashaada oo ku dalbo sidaad rabto. Kadib, barnaamijka ayaa ku siin doona ikhtiyaarka aad u leedahay kudar calaamado, kudar hoosta qoraalka, ama abuur shax kooban. Markaad dhamayso, waa inaad soo dejiso natiijada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 10 barnaamijyo si ay ugu biiraan dhowr PDF-yada oo mid loo noqdo
Sawirada Photoshop: halka laga soo dejinayo
Burushka Photoshop ugufiican